Dammaanadda Tamarta Lacag La'aanta Ah * Deeqaha kuleylka ee beeralayda - Tamarta farxadeed
Boostada iyo Isgaadhsiinta lacag la'aanta ah ee beeralayda
Deeqaha ayaa la heli karaa iyada oo aan loo eegin dakhliga
Iyada oo ay Dawladda Hawlgallada Caawinta Cimilada, beeralayda waxay xaq u yeelan karaan mid ka mid ah nooDeeqaha Boostada Bilaashka ah ama Deeqaha Bakhaariyaha Bilaashka ah
Wax kasta oo aad ku beeran karto Ingiriiska, haddii qof ku nool gurigaaga ama mid ka mid ah hantidaada uu yahay mid faa'iido leh, marmarka qaarkoodna xataa haddii aysan ahayn, Happy Energy waxay awoodi kartaa inay ku siiso deeq loogu talagalay hagaajinta kuleylaha bilaashka ah ama kor u qaadka rakibidda.
Haddii aad kuleylkaaga gurigaaga kuleyliyo saliid, LPG ama kuleyliyaha kaydka, deeqaha ayaa laga yaabaa in la heli karo si loo cusbooneysiiyo nidaamkaaga boorsada cusub ee cusub ama kuleyliyaha kuleylka casriga ah ee casriga ah. Haddii beertaada ay kululaato gaasta caanaha, deeqaha ayaa weli laga yaabaa in la heli karo, laakiin waxaa laga yaabaa in ay qayb ka qaadato kharashka maaddaama deeqaha gaaska dabeysha ay ka hooseeyaan. Waxa kale oo aanu bixin karnaa deeqaha loogu talagalay daboolka derbiga iyo godadka daboolka.
Deeqaha ma heli karaa kuleylka cusub ee kuleylka?
Haa! Shaqadu ma noqon doonto mid bilaash ah, laakiin deeqda ayaa laga helayaa qiimaha rakibidda habka kuleyliyaha dhexe iyo qaboojiyaha cusub.
Miyaan u qalmaa?
Waxaa jira siyaabo badan oo 4 ah oo aad xaq u yeelan kartid mid ka mid ah deeqaha kuleyliyaha:
Haddii aad ku xiran tahay ugu yaraan 2 guryaha isla nidaamka kuleylka
Degmooyinka qaarkood waxaa suurtagal ah in aad xaq u yeelatid deeqda kulaylka haddii aad dakhligaagu hooseeyo oo aad leedahay kulayl aad u sareeya, tusaale ahaan waxaad ku nooshahay guri weyn oo leh derbi adag, ama haddii aad ku jirto dakhliga hoose iyo qof gurigaaga ka mid ah oo qaba jirro muddo dheer ah oo laga yaabo in xaaladaha qaarkood ay ka mid yihiin arrimaha caafimaadka maskaxda. Waqtigan xaadirka ah ee koonfur-galbeed waxaa ku jira qorshahan, laakiin maamulka degaanka ee ku yaala Ingiriiska ayaa sidoo kale saxiixaya. Haddii aad aaminsan tahay in aad ku haboon tahay shuruudahan, fadlan nala soo xiriir, waxaanu u baahan doonaa inaan ku weydiino su'aalo taxane ah iyo in aan ogaano nooca dawladda hoose ee gurigaagu ku hoos yimaado. Waanu xaqiijin doonaa haddii aan awoodno inaan kaa caawinno deeqda kuleylka.
Anigu ma ahan wax faa'iido leh laakiin waxaan leeyahay 2 ama siyaabo badan oo aan ku xiri karo nidaamka kuleylka, maxay tahay deeqaha aan heli karo?
Haddii aad isku xirayso 2 guryaha, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay deeq aan loo eegin dakhligaaga. Tani waxay noqon kartaa guryaha 2, oo leh guri leh xarumo fasal oo isku xiran ama xarfaha beeraha. Guryuhu waa inay dhammaantood isku xiraan isla kuleylaha isla markaana sababtoo ah deeqda waxay ku saleysan yihiin kaydka CO2, kaydka ugu sareeya waa guryaha loogu talagalay korontada, saliida ama shidaalka adag kaas oo ku rakibaya nidaamka kuleyliyaha yar sida biomass, bamka kuleyl ama gaaska / LPG. Si aad wax badan uga ogaato fadlan nagala soo xiriir annaga oo noo sheeg waxyaabo badan oo ku saabsan guryahaaga iyo kuleylka hadda jira. Guryaha fasaxa uma qalmaan, laakiin guryaha kirada laga kiraysto waa kuwo.
* Deeqaha oo dhan waxay ku xiran yihiin xaq u yeelashada iyo sahan. Shaqooyinka had iyo jeer lagama yaabo inay xor u yihiin, laakiin haddii aysan shaqadu bilaash ahayn, laguma qasbi karo inaad sii wadato.
Dooro Tamarta Maalgashiga ah ee kuleylahaaga bilaash ah
Waxaan soo saaraa alaab tayo sare leh oo ka soo jeeda soo saarayaasha sare